Iintlelo ezixabisekileyo zamabali amafutshane ngabazalwana bakaGrimm noHans Christian Andersen | Uncwadi lwangoku
Iintlelo ezixabisekileyo zamabali amafutshane ngabazalwana bakaGrimm noHans Christian Andersen
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, I fantasy, Iincwadi, Iincwadi zoLutsha, Amabali
Zisisipho sabatshana bam, kodwa kubonakala kum ukuba baya kuzifunda sele bebadala kwaye bekwazi ukufunda ngcono. Okwangoku, umakazi wakhe, ongumntu wam, sele bonwabile kwezi iintlelo ezixabisekileyo zamabali akudala ngabazalwana bakaGrimm noHans Christian Andersen. Ukonwaba endikufumanisayo.
Ezi zihlanganisi zibandakanya ukhetho oluhle lwe Imifanekiso yezembali ngamagcisa asukela kwiminyaka yoo-20 ukuya koo-50. Phakathi kwabo bavela kwimbali kunye nodumo UKay nielsen nditsho nebritish UWalter Crane, uhamba UHarry Clarke, uHeinrich Strub, uHerbert Leupin okanye ULotte Reiniger, Uvulindlela woopopayi wecinematographic.
Banjalo yenzelwe abafundi bayo yonke iminyaka kwaye ekuqaleni kwenye nganye kukho i- uhlalutyo olupheleleyo ukusuka kumhleli, UNoel daniel, kubomi nakwimisebenzi yeGrimms kunye neAndersen. Kwaye banokuphinda baqwalaselwe Iincwadi zobugcisa.
UJakob noWilheim Grimm fueron Izifundo zaseJamani kunye neengcali zeelwimi ochithe iminyaka ehlanganisa iintsomi kunye nezinye iintsomi ezinje ICinderella, Mhlophe qhwa y Rapunzel. Iziphumo zazingaphezulu kwe- Amabali angama-200, enye ye ingqokelela yamabali adumileyo ehlabathini, (Kuthiwa phambi kwayo kukho iBhayibhile kuphela). Impembelelo kunye nokuphefumlelwa Kwisizukulwana esidlulileyo nesizayo sababhali, iimvumi, amagcisa, kunye nabenzi beefilimu kunokwenzeka engenasiphelo.
Iintsomi zibandakanyiwe kukhetho: I-Frog King okanye uHenry i-Iron, i-Raponchigo, i-Häsel kunye ne-Gretel, i-The Brave Little Tailor, i-Cinderella, Nkskz Holle, i-Little Red Riding Hood, i-Sleeping Beauty, i-Snow White, i-Jumping Dwarf, i-Starfall, i-Puss kwi-Boots, i-Goose yegolide , amakhosazana alishumi elinambini edanisa.
Ewe zikhona ukulungelelaniswa kwefilimu Ngokusekwe kubo bobabini uMzalwana uGrim noAndersen. Koku kutshanje, Imfihlo yabazalwana bakaGrimm, de UTerry Gilliam (2005), kunye UHeath Ledger kunye noMat Damon, Ejike ibali lakhe laba ngumxholo wobugqi kunye nobumnyama njengakwiintsomi zakhe.
«Ubomi uqobo lwentsomi»Ngaba lelinye lamabinzana enokwenzeka umbhali odumileyo waseDenmark ngalo lonke ixesha. UAndersen wazalelwa e Inzwakala, ngo-1805. Ukusuka Imvelaphi ethobekileyo kunye nokuzimela wedwa, kungekudala waba nengcinga enkulu. Wayekwangumbongi kunye nomdlali odlalayo.
Iintsomi zibandakanyiwe kukhetho: Inkosazana kunye ne-Pea, i-Nightingale, i-Mermaid encinci, Iimpahla ezitsha ze-Emperor, i-Soldier ye-Tin, i-Queen Queen, i-Ugly Duckling, i-Tinder Lighter.
Eyona nto ayikhumbulayo kakhulu kukwenza ifilimu Andersen entleNguCharles Vidor (1952), ngumculo kunye noDanny Kaye owayedlala umbhali waseDenmark kwenye yezo midlalo kunye neemovie ukuba xa umbona njengomntwana, awusayi kulibala. Ayisiyo ngobomi, kodwa yintsomi malunga noAndersen kwaye yayinjalo impumelelo yamazwe ngamazwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » Iintlelo ezixabisekileyo zamabali amafutshane ngabazalwana bakaGrimm noHans Christian Andersen
Ingrid ojeda sitsho
Phendula u-Ingrid Ojeda
Mhlawumbi nakweyiphi na ivenkile yeencwadi okanye kwi-Intanethi. Okanye kwiwebhusayithi yaseTaschen, ewe.
Iincwadi zam ezi-3 zokufunda ekwindla